Beeralayda Puntland oo dowladda baaq udirtay (daawo) – Radio Daljir
Beeralayda Puntland oo dowladda baaq udirtay (daawo)
Abriil 16, 2019 8:27 b 0
Beeralayda deegaanka Laasacurdan ayaa soo bandhigay dalagyada kala duwan ee ka soo baxa beeraha ku yaala deegaanka.
Beeralayda ayaa dowladda Puntland ugu baaqday in ay hormariyaan wax soo saarka dalka.
Qudaarta ayaa inta badan Puntland waxaa looga keenaa dalka aan dariska nahay ee Itoobiya iyo gobolada koonfureed ee Soomaaliya.
(Daawo) Beeralayda deegaanka Laasacurdan,maxay kaga qayb gali doonaan bandhiga wax soo saarka beeraha Puntland ee Garoowe ka dhicidoona 14ka bihsan.?Maxaadse ka ogtahay kheyraadka dihin ee deegaanka kujira iyo sida ay uga qatanyihiin dadkii ka faaiidaysan lahaa?Waamaxay wax yaabaha aasaasiga ah ee ay beeralayda Puntland uga baahan yihiin dowladda, iyo Hay,adaha caalamiga ah in ay ka taageeraan?Halkan kaga bogo.
Posted by Ururka Beeralayda 9 gobol ee puntland on Saturday, April 13, 2019